ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး သငျ့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံ ပွောငျးလဲရတဲ့ အကွောငျးရငျးမြား - Lifestyle Myanmar
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး သငျ့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံ ပွောငျးလဲရတဲ့ အကွောငျးရငျးမြား
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျးမှာ အမြိုးသမီးအတျောမြားမြားဟာ သူတို့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံပွောငျးလဲလာတာကို သတိထားမိကွပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ တခြို့အစားအစာတှဆေို အနံ့အသကျ မခံနိုငျတာ၊ ခန်ဓာကိုယျအနံ့တှေ၊ ဆံပငျအလှကုနျတှကေို အနံ့မခံနိုငျတာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ တကယျတော့ ၎င်းငျးက ပြို့ခငျြအနျခငျြတာ၊ ဒေါသထှကျတာနှငျ့ စိတျကရြောဂါကိုတောငျ လှုံ့ဆျောပေးနိုငျပါတယျ။
အနံနှငျ့ အရသာအကွား ခြိတျဆကျမှုတှကွေောငျ့ တခြို့အစားအစာတှကေို မနှဈသကျတာဟာ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး အနံ့ခံအာရုံ ပွောငျးလဲမှုတဈခုနှငျ့အတူ ဖွဈပျေါလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို အနံ့အသကျတှေ မခံနိုငျတာက သဘာဝဖွဈတာမို့ စိုးရိမျစရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ကိုယျဝနျ ပထမသုံးလပတျအတှငျးမှာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဖွဈပျေါပွီး morning sickness ကို အကွိမျကွိမျ ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
အလားတူပငျ မြားစှာသောလလေ့ာမှုတှမှော ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး အနံ့ခံအာရုံ မွငျ့တတျမှုဟာ အဖွဈမြားတယျလို့ အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးအမြားစုဟာ တဈခြိနျခြိနျမှာ အနံ့နှငျ့ပတျသတျပွီး ထိခိုကျလှယျမှု ကွီးကွီးမားမား ဖွဈတာကို သတိထားမိကွပါတယျ။
သို့သျော တခြို့အမြိုးသမီးတှကေ သူတို့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံ မသိမသာလေး ပွောငျးလဲတာကိုသာ သတိထားမိကွပါတယျ။ တခွားသူတှမှော တခြို့အနံ့အသကျတှေ လှမျးမိုးလာကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ အမြားစုကတော့ ကလေးမှေးပွီးတာနဲ့ ပုံမှနျအတိုငျး ပွနျဖွဈသှားပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျတာဟာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျက မတူပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ မိခငျတဈယောကျစီဟာ ဘယျလိုအနံ့အသကျကို respond ဖွဈမယျဆိုတာ အတိအကြ ပွောလို့မရပါဘူး။ အကွံပွုခကျြကတော့ အခြို့သော အစားအစာနဲ့ အခြိုရညျတှကေို ရှောငျကွဉျခွငျးဖွငျ့ ဒီပွဿနာတှကေို ဖွဈပျေါစသေော အနံ့နှငျ့ ထိတှနေို့ငျခွကေို လြှော့ခနြိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး သငျ့ရဲ့အနံ့ခံအာရုံ ပွောငျးလဲရတဲ့ အကွောငျးရငျးမြား
အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ တခြို့အနံ့တှကေို ဘာ့ကွောငျ့ မတူညီစှာ တုံ့ပွနျရသလဲဆိုတာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးမသိကွသေးပါဘူး။ သို့သျောလညျး အောကျပါအခကျြတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
၁။ သှေးစီးဆငျးမှု တိုးမွှငျ့လာတာကွောငျ့
ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ပလာစမာရဲ့ အတိုးအလြှော့က ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး နှဈဆနီးပါးတိုးပါတယျ။ ဒီအပွောငျးအလဲမှာ သငျ့ကို အနံ့အသကျတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ပိုပွီး sensitive ဖွဈစပေါတယျ။
ပထမသုံးလပတျအတှငျးမှာ အီစရိုဂငျြနဲ့ ဟျောမုနျးတှေ တိုးလာခွငျးက ပြို့အနျခွငျးကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ အနံ့ပွငျးပွငျးတှကေ ဒီပွဿနာကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အနံ့ခံအာရုံမွငျ့မားမှုက morning sickness နှငျ့ အနီးကပျ ဆကျစပျနကွေောငျး စိတျထဲမှာ မှတျထားပေးပါ။
၃။ ကာကှယျရေး ယန်တရား
သငျ့ရဲ့အနံ့ထံအာရုံက ကလေးရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေနေ ကငျးဝေးအောငျ စောငျ့ရှောကျဖို့ ကာကှယျရေးယန်တရား တဈခုတောငျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး သငျ့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံကို ဘယျလိုတိုးတတျစနေိုငျသလဲ?
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး အနံ့ခံအာရုံကို တိုးတတျကောငျးမှနျဖို့ သငျလိုကျနာနိုငျမယျ့ အကွံပွုခကျြတဈခြို့ရှိပါတယျ။ ဒီအပွောငျးအလဲမြားက သငျ့ကို အကူအညီမဖွဈလြှငျ၊ တခြို့အနံ့တှကေ သငျ့ကိုပြို့ခငျြအနျခငျြဆဲပဲဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ ရောဂါကို သကျသာစမေနိုငျမယျ့ သဘာဝကုထုံးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
သငျသညျးခံနိုငျတဲ့ အနံ့အသကျကောငျးသော ဟငျးတှေ ခကျြစားပါ။ အနံ့မခံနိုငျတဲ့ ဟငျးတှကေို ဒီအခြိနျမှာ ရှောငျရှားပါ။ အနံ့မခံနိုငျတဲ့ အစားအစာကို ကွိတျမှိတျစားရငျ မစားခငျြတာတှေ၊ မစားနိုငျတာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဟငျးခကျြတဲ့အခါ အခနျးတှငျးမှာ အနံ့တှမေကနျြအောငျ တတျနိုငျသလောကျ ပွတငျးပေါကျတှကေို ဖှငျ့ထားပါ။
အနံ့အသကျတှကေ အဝတျအထညျတှမှော စှဲနိုငျတာကွောငျ့ သငျ့အဝတျအစားတှေ ၊လကျသုတျပုဝါတှနေဲ့ ညအိပျအဝတျအစားတှကေို ပုံမှနျထကျ မကွာခဏလြှျောပေးပါ။
အနံ့မရှိတဲ့ သနျ့ရှငျးရေးထုတျကုနျတှကေို ပွောငျးသုံးပါ။
ပိုကောငျးတယျလို့ ခံစားရတဲ့ အနံ့တှပွေောငျးသုံးပါ။ ပူစီနံအနံ့၊ သံပုရာနံ့ တှကေ ပြို့အနျမှုကို သကျသာစတေဲ့ အနံ့ကောငျးတှေ ဖွဈပါတယျ။
လကျကိုငျပုဝါတဈခုပျေါမှာ သငျနှဈသကျတဲ့ အမှေးရနံ့ဆီအစကျအနညျးငယျထညျ့ပွီး သငျ့အိတျထဲမှာ ထညျ့ထားပါ။ ရှောငျရှားလို့မရတဲ့ အနံ့ပွငျးပွငျးတှေ ကွုံလာတဲ့အခါ လကျကိုငျပုဝါနဲ့ နှာခေါငျးကို အုပျထားလို့ရပါတယျ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး အနံခံအာရုံပွောငျးလဲတာဟာ ပုံမှနျဖွဈတယျဆိုတာ သတိရပါ။ ဒါက စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။ ကလေးမှေးပွီးနောကျမှာ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း သင့်ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံ ပြောင်းလဲရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးအတော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံပြောင်းလဲလာတာကို သတိထားမိကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ တချို့အစားအစာတွေဆို အနံ့အသက် မခံနိုင်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အနံ့တွေ၊ ဆံပင်အလှကုန်တွေကို အနံ့မခံနိုင်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ ၎င်းက ပျို့ချင်အန်ချင်တာ၊ ဒေါသထွက်တာနှင့် စိတ်ကျရောဂါကိုတောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အနံနှင့် အရသာအကြား ချိတ်ဆက်မှုတွေကြောင့် တချို့အစားအစာတွေကို မနှစ်သက်တာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အနံ့ခံအာရုံ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အနံ့အသက်တွေ မခံနိုင်တာက သဘာဝဖြစ်တာမို့ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ကိုယ်ဝန် ပထမသုံးလပတ်အတွင်းမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပြီး morning sickness ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အလားတူပင် များစွာသောလေ့လာမှုတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အနံ့ခံအာရုံ မြင့်တတ်မှုဟာ အဖြစ်များတယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအများစုဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အနံ့နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်မှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်တာကို သတိထားမိကြပါတယ်။
သို့သော် တချို့အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံ မသိမသာလေး ပြောင်းလဲတာကိုသာ သတိထားမိကြပါတယ်။ တခြားသူတွေမှာ တချို့အနံ့အသက်တွေ လွှမ်းမိုးလာကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အများစုကတော့ ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က မတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မိခင်တစ်ယောက်စီဟာ ဘယ်လိုအနံ့အသက်ကို respond ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အတိအကျ ပြောလို့မရပါဘူး။ အကြံပြုချက်ကတော့ အချို့သော အစားအစာနဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ဒီပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အနံ့နှင့် ထိတွေ့နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း သင့်ရဲ့အနံ့ခံအာရုံ ပြောင်းလဲရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ တချို့အနံ့တွေကို ဘာ့ကြောင့် မတူညီစွာ တုံ့ပြန်ရသလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ သွေးစီးဆင်းမှု တိုးမြှင့်လာတာကြောင့်
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပလာစမာရဲ့ အတိုးအလျှော့က ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း နှစ်ဆနီးပါးတိုးပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲမှာ သင့်ကို အနံ့အသက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုပြီး sensitive ဖြစ်စေပါတယ်။
ပထမသုံးလပတ်အတွင်းမှာ အီစရိုဂျင်နဲ့ ဟော်မုန်းတွေ တိုးလာခြင်းက ပျို့အန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အနံ့ပြင်းပြင်းတွေက ဒီပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနံ့ခံအာရုံမြင့်မားမှုက morning sickness နှင့် အနီးကပ် ဆက်စပ်နေကြောင်း စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားပေးပါ။
၃။ ကာကွယ်ရေး ယန္တရား
သင့်ရဲ့အနံ့ထံအာရုံက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကနေ ကင်းဝေးအောင် စောင့်ရှောက်ဖို့ ကာကွယ်ရေးယန္တရား တစ်ခုတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း သင့်ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံကို ဘယ်လိုတိုးတတ်စေနိုင်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အနံ့ခံအာရုံကို တိုးတတ်ကောင်းမွန်ဖို့ သင်လိုက်နာနိုင်မယ့် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲများက သင့်ကို အကူအညီမဖြစ်လျှင်၊ တချို့အနံ့တွေက သင့်ကိုပျို့ချင်အန်ချင်ဆဲပဲဆိုရင် သင့်ရဲ့ ရောဂါကို သက်သာစေမနိုင်မယ့် သဘာဝကုထုံးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
သင်သည်းခံနိုင်တဲ့ အနံ့အသက်ကောင်းသော ဟင်းတွေ ချက်စားပါ။ အနံ့မခံနိုင်တဲ့ ဟင်းတွေကို ဒီအချိန်မှာ ရှောင်ရှားပါ။ အနံ့မခံနိုင်တဲ့ အစားအစာကို ကြိတ်မှိတ်စားရင် မစားချင်တာတွေ၊ မစားနိုင်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းချက်တဲ့အခါ အခန်းတွင်းမှာ အနံ့တွေမကျန်အောင် တတ်နိုင်သလောက် ပြတင်းပေါက်တွေကို ဖွင့်ထားပါ။
အနံ့အသက်တွေက အဝတ်အထည်တွေမှာ စွဲနိုင်တာကြောင့် သင့်အဝတ်အစားတွေ ၊လက်သုတ်ပုဝါတွေနဲ့ ညအိပ်အဝတ်အစားတွေကို ပုံမှန်ထက် မကြာခဏလျှော်ပေးပါ။
အနံ့မရှိတဲ့ သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်တွေကို ပြောင်းသုံးပါ။
ပိုကောင်းတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အနံ့တွေပြောင်းသုံးပါ။ ပူစီနံအနံ့၊ သံပုရာနံ့ တွေက ပျို့အန်မှုကို သက်သာစေတဲ့ အနံ့ကောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ကိုင်ပုဝါတစ်ခုပေါ်မှာ သင်နှစ်သက်တဲ့ အမွှေးရနံ့ဆီအစက်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး သင့်အိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါ။ ရှောင်ရှားလို့မရတဲ့ အနံ့ပြင်းပြင်းတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့ နှာခေါင်းကို အုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အနံခံအာရုံပြောင်းလဲတာဟာ ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဒါက စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ကလေးမွေးပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။